Akụkọ - PVC mkpuchi / VINYL mkpuchi
Waya ntupu akpa
Ihe ngwongwo na ngwongwo ígwè
Ngwongwo anu ulo
Anụ Egwuregwu Pet
Chain Link ngere
Welded waya ntupu
Gbasaa Metal ntupu
Ogige na Ọnụ Gatezọ .má
Ọnụ Gatezọ Gardenmá Ogige
Steel ngere Post
Lawn na Ogige
Waya nwere ogwu
Igwe Waya Iron
COkwanyere ntekwasa / Vinyl ntekwasa
A na-ezigara ndị ọrụ nne nna nna m ka ha fụchie nke ọma. Igwe a na-ahụkarị vinyl na ụdị mkpuchi waya niile, gụnyere ntupu eji eji ọnyà lobster. N'ebe a akwa mkpuchi dị elu, nke gbara agba ma na-agbanwe agbanwe nke UV mesoro Black PVC na-ejikọta nke ọma na ntupu waya. Ejiri mkpuchi ahụ sie ike nke na ọ na-egbochi ịkpụcha. Enweghi ike iji aka aka kpochapu ya. Ọ gaghịkwa apụ apụ ngwa ngwa.
Emechara ngwaahịa bụ àgwà mbụ na nke ọ bụla. Lifetimetụle ndụ gị siri ike ịkọ. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị na ikuku, ala na mmiri ozuzo nwere mmetụta na ogologo oge fencing ihe onwunwe ga-adịgide. Ọnọdụ ndị a dịgasị nnọọ iche site n'otu akụkụ obodo gaa na nke ọzọ.
Mara ihe a na-emepụta site na igwe nri nke nne nna m nke ọkachamara na PVC maka 15years nwere ike inye gị obi ike na ngwaahịa a bụ nke kachasị elu. Mmezi ọzọ na mbupu gụnyere ịkwaga ihe site n'otu igwe igwe nri na nke ọzọ agaghị agbakwunye na ọnụahịa ahụ n'oge obere oge. Mana ogo na ntachi obi dị na mpịakọta ọ bụla ma kwuo maka ya.
Post oge: Dec-29-2020
Liusu Industry Mpaghara, Ding Zhou City, Hebei Province, PRC.